Finoana miozolmana - Wikipedia
Ny finona miozolmana, na مَان /ʾīmān amin' ny teny arabo, dia tenim-pinoana (dôgma) silamo dia ireo petra-kevitra tsy azo ovana momba ny finoana ao aimin' ny fivavahana silamo. Misy enina izy ireo, dia ireto avyː
Mino ny fisiana sy ny maha tokana an' Andriamanitra (Allah);
Mino ny fisian' ny mpaminanyː i Mohamady no farany amin' izy ireo, i Jesoa no alohan' ny farany.
Mino ny fisian' ny boky nalefan' Andriamanitra ety an-tany, izay nataon' Andramanitra, ka ny Kor'any no farany, no talohan' ny farany, ary ny Torah no voalohany.
Mino ny fisian' ny Andron' ny fitsarana faranyː amin' izany andro izany dia hizara vondrona roa ny olombelonaː ny an' ny Paradisa sy ny an' ny Afobe. Ireo vondrona roa ireo dia hisy zana-bondrona.
Mino ny fisian' ny lahatra izay mety ho ny tsara na ny ratsy.
1 Finoana ny fisian' Andriamanitra tokana
2 Finoana ny fisian' ny anjely
3 Finoana ny fisian' ny mpaminany
4 Finoana ny fisian' ny boky nalefan' Andriamanitra ety an-tany
5 Finoana ny fisian' ny Andron' ny fitsarana farany
6 Finoana ny fisian' ny lahatra
Finoana ny fisian' Andriamanitra tokana[hanova | hanova ny fango]
Mônôteista ny fivavahana silamo. Allah no anaran' Andriamanitra. Izany mahatokana an' Andriamanitra izany no atao amin' ny teny arabo hoe Tawhîd, izay hamafisina amin' ny fiekem-pinoana (arabo: Shahâda) hoe: "Manambara aho fa tsy misy andriamanitra hafa afa-tsy i Allah ary i Mohamady no irak' Andriamanitra" (arabo: "اشهد ان لآ اِلَـهَ اِلا الله و أشهد ان محمدا رسول الله ").
Ny soràta 112 (Al-Ikhlas) dia mamondrona ny fotopotony amin' ny fiheveran' ny silamo an' Andriamanitra: "Izy no Allah tokana, Allah tsy takatry ny eritreritra, tsy miteraka Izy, tsy nateraka Izy, ary tsy mitovy na amin' inona na amin' inona Izy".
Amin' ny Miozolmana dia i Allah no mpahary izao rehetra izao (na ‘âlam), ka maro ny teny amaritan' ny boky Kor'any ny toetrany, toy ny hoe "mahery", "mahay", "be indra fo", sns. Anarana miisa 99 no omen'ny fivavahana silamo an' ity Andriamanitra tokana ity, izay atao hoe "anaran' Andriamanitra tsara indrindra". Tsy lahy tsy vavy Andriamanitra. Mpahary sy mahefa ny zava-drehetra sy mahalala ny zava-drehetra ary mihoatra ny zavaboary noforoniny izy.
Finoana ny fisian' ny anjely[hanova | hanova ny fango]
Ny teny arabo dia manao ny anjely hoe ملاك / malāk (raha tokana) na ملاًئِكة / malā'ikah (raha maro)". Irak' Andriamanitra ny anjely. Namboarin' Andriamanitra tamin' ny hazavana na ny rivotra mafana izy ireo. Ao amin' ny finoana silamo, ny anjely dia tsy afaka handà ny asa ampanaovin' Andriamanitra azy ka tsy mitovy amin’ ny olombelona sy ny jiny izay manan-tsafidy. Tsy afaka manota ny anjely. Tsy hotsaraina izy ireo amin’ izany. Tsy misy noho izany ny atao hoe "anjely ratsy".
Voaresaka ao amin’ ny boky Kor'any ny anjely Jibrily (Gabriela/Gabriely) izay nampita ny fanambaràna ny zava-miafina tamin' ireo mpaminany. Miresaka momba an’ i Mikaela koa io boky io. Niteny tamin’ ny olona ny anjely: ohatra tamin' i Ibrahima (Abrahama) sy tamin' i Zakaria ary tamin' i Mariama (Maria).
Sady tsy lahy no tsy vavy ny anjely. Ambony noho ny olona rehetra, afa-tsy ny mpaminany Mohamady, ny anjely. Manohana sy miaro ny mpino amin’ ny fahavalony ny anjely.
Finoana ny fisian' ny mpaminany[hanova | hanova ny fango]
Mino ny fisian' ny mpaminany ny silamoː Araka ny Kor'any dia i Adama (آدم / Âdam) no mpaminany voalohany ary i Mohamady no farany. Miisa 25 ny mpaminany resahina ao amin' ny boky Kor'any. Anisan' ny mpaminany eken' ny silamo ho mpaminaniny ireo patriarka roa ambin' ny folo ao amin' ny Baiboly.
Mpaminany koa i Enoka (إدريس / Idrîs), i Noa (نوح / Nûh), i Abrahama (إبراهيم / Ibrâhîm), i Ismaela (إسماعيل / Ismâʿîl), i Lota (لوط, / Lût), i Isaaka (إسحاق / Ishâq), i Jakoba (يعقوب /Yaʿqûb), Jôsefa zanak' i Jakoba (يوسف / Yûsuf), Joakima rain' i Miriama (عمران /ʿImran), i Mosesy (مُوسَى / Mûsâ), i Aarona (هارون / Hârûn), i Jôba (أَيّوب / Ayyûb), i Jonà (يونس /Yûnas), i Sôlômôna (سُلَيْمان, / Sulaymân), i Davida (داوود, / Dâwûd), i Elia (إِلْيَاس / Ilyâs), i Elisa (اليَسَعَ / al-Yâsʿa), i Ezekiela (ذَو الكِفْل / Dhû'l-Kifl) ary i Ezra (عزير / ʿUzair). Misy koa ireo mpaminany miozolmana resahina ao amin' ny Testamenta Vaovao: i Zakaria rain' i Joany (زَكَرِيَّا / Zakarîyâ) sy i Joany mpanao batista (يحْيى / Yahyâ) ary i Jesoa (عِيسى /ʿIsâ).
Mpaminany arabo i Hoda (هود / Hûd), i Jetro (شُعَيْب / Shuʿayb), i Salihy (صالح / Sâlih) mpaminanin' i Tamoda, ary i Mohamady (محمد / Muḥammad).
Finoana ny fisian' ny boky nalefan' Andriamanitra ety an-tany[hanova | hanova ny fango]
Mino ny fisian' ny boky nalefan' Andriamanitra ety an-tany ny silamo, izay nataon' Andramanitra, dia ny Torah (توراة‎) / Tawrat) nambara tamin' i Mosesy, ary ny Salamo (الزَّبُورُ‎ / Zabūr) nambara tamin' i Davida, ny Evanjely (إنجيل / ʾInjīl) nambara tamin' i Jesoa, ary ny Kor'any (القرآن‎ / al-Qurʼān) nambara tamin' i Mohamady. Ireo bokin' ny fivavahana mônôteista ireo dia avy amin' ny boky tokana atao hoe Renin' ny boky (soràta 3.7 sy soràta 13.39) izay tsy nambara manontolo amin' ny olona fa amin' ny ampahany ihany.
Finoana ny fisian' ny Andron' ny fitsarana farany[hanova | hanova ny fango]
Mino ny fisian' ny Andron' ny fitsarana farany ny silamo. Ao amin' ny Kor'any, dia voasoratra ny Andron' ny Fitsarana (arabo: يَوْم الدِّينِ / Yawn al-Dyn "Andron' ny Fitsarana", na "Andron' ny Famaliana") (1.4; 15.35; 26.82; 37.20; 38.78; 51.12; 56.56; 70.26; 74.46; 82.17; 82.18; 83.11), ohatra ao amin’ ny soràta faha-26 dia izao no voasoratra: "Ary avy Aminy no itsiriritako ny famelana ireo heloko amin' ny Andron' ny Famaliana". Ankoatran' ny Andron' ny Fitsarana, dia voasoratra koa ny Andron' ny Fitsanganana amin' ny maty (arabo: يوم القيامة: / Yawm al-Qiyāmah).
Zava-dehibe amin' ny finoana silamo ny fitsanganana amin' ny maty sy ny fitsarana farany. Araka ny Kor'any dia zava-poana ny famoronana ny olombelona raha tsy misy ny fitsanganana amin' ny maty sy ny fitsarana farany. Inoana fa amin' izany fotoana izany dia hatsangan' i Allah ho velona ny maty avy ao am-pasana, amin' ny andron' ny fitsarana, araka ny efa nampanantenainy. Toy ny namoronan' i Allah ny olombelona no hananganany azy indray amin' ny maty.
Amin' izany andro izany dia hizara vondrona roa ny olombelonaː ny an' ny Paradisa (جنّة / janna) sy ny an' ny Afobe (جهنم / jahannama). Ireo vondrona roa ireo dia hisy zana-bondrona. Ny Afobe dia toeram-pijaliana izay hanasaziana ireo "tsy mino". Ny Paradisa kosa no toeram-pahasambarana mandrakizay atokana ho an' ireo olona nahatoky teo anatrehan' Andriamanitra.
Finoana ny fisian' ny lahatra[hanova | hanova ny fango]
Mino ny fisian' ny lahatra (na fanendrena mialoha), izay mety ho ny tsara na ny ratsy ny silamo. Atao amin' ny teny arabo hoe القضاء و القدر / al-qaḍāʾ wa al-qadar ny lahatr' Andriamanitra. Izany lahatra izany dia tsy manafoana tanteraka ny fahalalahan' ny olombelona, ka samy tompon' andraikitra amin' ny ataony ny olona tsirairay.
Andriamanitra ao amin' ny silamo
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Finoana_miozolmana&oldid=1040724"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 09:45 ity pejy ity.